Nianjera Ilay ‘Kamiao Skunk’ Israeliana: Faly ny Palestiniana, Fa Inona io No Tena Marina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2014 3:20 GMT
Nipoitra tamin'ny Aterineto ary tonga dia lasa nalaza sy niparitaka avy hatrany ilay lahatsary iray mampiseho ‘kamiao Skunk’ Israeliana (mpanaparitaka rano maimbo) nianjera tany anaty hantsana tany Jerosalema, izay nahafaly sy nampitehaka ireo Palestiniana mpandalo.
Mampiseho ilay fiara manaparitaka rano maimbo tamin'ny tanàna manodidina ilay lahatsary mihozongozona nalain'ireo ankizy. Miteny amin'ny fiteny Arabo, mikiakiaka ilay ankizy iray, amin'ny fanombohan'ilay dikasary, nilaza hoe manakaiky ny tranony ilay fiara ary nanontany raha efa mihidy daholo ny varavarana sy ny varavarankely.
Araka ny Electronic Intifada:
Nihely be tamin'ny media sosialy ilay lahatsary ary nalefa androany vao maraina tamin'ny pejy Facebook-n'i Quds News Network. Nitatitra ny TV Wattan fa nalefa ilay kamiao mpanaparitka rano maimbo, taorian'ny nankanesan'ireo tanora teny an-dalamben'ny tanànan'i al-Tur mba hanohitra ny fitazonana mitranga amin'izao fotoana ataon'ireo mpitandro filaminana mpibodo tany.
Rehefa nahatsapa ny tena zava-mitranga ireo zazalahy roa Palestiniana naka ilay dikasary, nikiakiaka ny ‘Takbir’ sy ‘Allahu Akbar’ izy ireo, hiaka fanao matetika any Palestina sy any amin'ny tany Arabo sy Silamo ireo roa ireo ho an'ny fankalazàna sy ny fahakiviana (miankina amin'ny zava-mitranga) . Araka ny fanazavan’ny iray amin'ireo mpanivana ao amin'ny r/CombatFootage an'ny Reddit, amin'ny fandinihana lalina ny sary avy amin'ny ady, ato amin'ity lahatsoratra voatokana ho amin'izany ity:
ilay fomba fiteny amin'ny maha-fiteny azy dia fampahatsiahivana ho an'ny Silamo fa na ahoana na ahoana ny zava-miseho na ny fihetseham-pontsika, lehibe lalandava mihoatra an'izany Andriamanitra. Raha faly ianao, dia entina ampahatsiahivana io fa lehibe noho ny zava-drehetra Andriamanitra, ary avy amin'Andriamanitra no hiavian'ny fahombiazanao sy ny fifalianao. Raha matahotra ianao, dia miteny io ianao mba hampahatsiahivana fa lehibe tokoa Andriamanitra, ary ny hany fahatahorana tokony ananan'ny Silamo dia amin'Andriamanitra ihany. Rehefa tezitra ny Silamo, miteny hoe Allahu Akbar izy, mba ho entiny hampitony ny tenany, ho fampahatsiahivana fa lehibe noho ny zavatra mahatezitra anao Andriamanitra, ary mitodika amin”Andriamanitra ho an'ny fiononanao.
Raha maro ny olona mitehaka amin'ireo tànany any amin'ny firenena tandrefana ho fanehoana ny fanekena sy ny fideràna, fanaon'ireo Silamo hatrizay kosa ny miaraka mikiakiaka amin'ny fitaovana fanamafisam-peo ny Takbir, mba ho fomba hanehoana ny fanekena sy ny fideràna. Na dia Silamo maro aza no efa nandray ilay fomba fitehafana amin'ny tànana, maro koa ireo mbola mikiakiaka ny Takbir sady mitehaka.
Avy eo nazavainy hoe ahoana no tsy voatery voafetra ho an'ny Silamo io:
Tsy voatery ho voafetra ho an'ny Silamo ihany ny Takbir . Andriamanitra amin'ny fiteny Arabo ny hoe Allah. Mampitovy an'Andriamanitra amin'i “Allah” ireo Arabo Kristiana maro, ary tsy vitsy ny ahitana pretra Kristiana any Afovoany Atsinanana ary ny tany Silamo miteny hoe “Allahu Akbar!” amin'ireo vahoaka tantaniny. Ny tena marina, nisy ireo tatitra ary lahatsary ahitana ireo Kristiana Marônita any Libanona, nikiakiaka hoe “Allahu Akbar!” sady niady tamin'ny ady an-trano Libane. Ny fiteny Malta ihany koa mampiasa ny Allah ilazany an'Andriamanitra, na dia Katôlika sy Eorôpeana aza ny ankamaroan'ireo mponin'i Malta.
Notohizan'ireo mponina manontolo teo amin'ny tanàna tamin'ny fitehafana sy firavoravoana (manomboka eo amin'ny 1:10), ny hikam-pifalian'ireo ankizy (“nianjera ilay kamiao!”)
Namoaka sary iray mampiseho ilay kamiao taorian'ny fianjerany ilay mpanao gazetin'ny ny Marin'ny Firnena Mikambana (UN-Truth) Marian Houk.
[Lazaina an an-kafa ho mpanaparitaka rano maimbo] Araka ny @TheFrimer, nianjera teny an-dàlana ilay kamiao fitahirizan-dranoky ny mpitandro filaminana nandritra ny nanaovan'ny Palestiniana hetsi-panoherana tany E Jlem pic.twitter.com/uROC5gUEWz
Nilaza io ho ‘mahatretrika’ ilay mpikatroka mafana fo, Rania Khalek :
Lahatsary mahatretrik'ilay kamiao maimbo Israeliana nianjera teny amin'ny làlan'i Jerosalema. Notantarain'ireo ankizy mahafatifaty https://t.co/jKPKRyOTog
Mpikatroka mafana fo mipetraka any Etazonia i Remi Kanazi, nananihany nilaza hoe ‘Mpibodo tany tsy nandalo sekoly fianarana mamily’ ilay mpamily
Mpaka an-keriny tsy nandalo sekoly fianarana mamily MT @dancohen3000 Kamiao skunk, nianjera niala ny làlana, raha namafy rano maimbo tany Jerosalema pic.twitter.com/P6ITh9Idmz
Adri Nieuwhof, mipetraka any Soisa, mangataka amin'ilay Alemana mpamokatra kamiao “MAN Group” mba hijery hoe ahoana ny ampiasain'ireo Hery Israeliana Mpibodo tany ny vokatr'izy ireo
E! ry @MAN_Group Alemana mpamokatra kamiao a, jereo ny ampiasàn'ny Israeliana ny kamiaonareo, mba hamafazana rano maimbo amin'ny Palestiniana. http://t.co/4jyUXzw5a3 @intifada
Inona tokoa “Ny Skunk”?
Ny Skunk dia rano maimbo be, izay nolazaina fa fifangaroan'ireo faty mihapotika sy rano maloto avy nampiasaina ary lo, novolavolaina voalohany tamin'ny taona 2004, nataon'ny Rafael Armament Development Authority ho an'ireo mpitandro filaminana Israeliana hiatrehana ireo hetsi-panoherana am-pilaminana efa voaoman'ny olom-pirenena, izay niha-betsaka tany Amoron'i Jordana, tany nobodoina an-keriny.
Ilay rano Skunk (maimbo) nampiasaina tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tany amin'ny tany nobodoina amoron'i Jordana.
(Sary avy tamin'ny טל קינג, Wikimedia)
Manoratra ho an'ny LA Times, namaritra ny Skunk ho toy izao i Edmund Sanders :
Fofona malefaky ny faty mihapotika ve io? Fako ariana amin'ny andro mahamay? Lò? Mikosoka fa tsy mahazo vokany akory ireo izay voatondraka, miezaka mitady fomba fiteny mahalaza ilay fofona tsy afaka mandritra ny andro maromaro, na ahoana na ahoana ny fomba hikosehanao azy. Antsoin'ireo tafika Israeliana hoe Skunk ilay kamiao, ary lazain'izy ireo fa lasa io no fitaovana tian'izy ireo indrindra amin'ny fifanandrinana amin'ireo fihetsiketsehana miha-mitombo any amoron'i Jordana.
Nampiasa teny mitovitovy entina hilazalazana ilay rano Skunk i Nabi Saleh sy Noah Browning, manoratra ho an'ny Reuters:
Alaivo sary ao an-tsaina anie hoe maka faty mihasimba avy ao amin'ny rano maloto miandrona ianao, mametraka iny ao anaty fitaovana fanapotehana ary manatsifotra ilay rano maloto amin'ny tarehinao. Tonga ho azy ny fitiavanao hando ary tsy afaka miala amin'iny ianao, satria maharitra andro maromaro ilay fofona maimbo be. Izany ny “skunk”, fitaovana tena henjana fa tsy mahafaty ao amin'ny karazam-piadian'i Israely mba hifehezana ny vahoaka. Entina ao anatin'ny kamiao fitahirizan-dranoka tsara aro io, izay misy tafondro afaka manondraka rano maimbo amin'ny vahoaka izay efa mahalala ny azo atao hiatrehana ilay entona mandatsa-dranomaso taloha.
Tamin'ity indray mandeha ity, Wyre Davies, mpanao gazety hafa avy amin'ny BBC, mipetraka ao Jerosalema nanampy hoe,
“Alaivo sary ao an-tsaina ny ratsy indrindra, ny zavatra farak'izay maharikoriko, maimbo indrindra nofofoninao hatrizay. Fifangaroana tsy zaka intsony anà hena masiso, bàn-kiraro tsy nosasaina nandritra ny herinandro maro – saloran'ny fofona manaikitry ny zohindriaka tsy misy sarony. . .Alaivo sary ao an-tsaina hoe voatondrak'io ianao, satria atondratondrak'ilay tafondron-drano fotsiny ilay izy. Avy eo, saino hoe tsy afaka miala amin'ilay fofona mihitsy ianao mandritra ny telo andro farafahakeliny, na impiry na impiry ianao no miezaka mikosoka tena mba hadio.”
Ankoatran'ny fofona, mety hankarary, hiteraka menamena, fangirifiriana, ary aretin-kibo mitaky fitsaboana amin'ny fanafody koa ny Skunk . Eny, nanazavazava io toy izao ny Fikambanana ho an'ny Zon'ny Olon-tsotra any Israely (Association for Civil Rights in Israel):
Ankoatra ilay fofona mankaloiloy mampandò, mety mankarary sy miteraka menamena ilay ranoka skunk raha mahakasika ny maso, mangirifiry raha mahakasika ny hoditra, ary miteraka aretin-kibo ilàna fitsaboana amin'ny fanafody raha voatelina.
Nanampy izao ny fikambanana Israeliana tsy miankina amin'ny fanjakana miaro ny zon'olombelona, any amin'ny Faritra Voabodo B'TSelem :
Tsy misy voka-dratsiny eo amin'ny fahasalamàna ny voan'ny Skunk amin'ny fatrany fampiasa matetika amin'ny fihetsiketsehana, fa kosa mety hankaloiloy sy hankandò. Matetika no atsifor'ireo hery fiarovanaany amin'ny trano sy tokotany ilay rano, izay mahasarotra tokoa ny hialàna amin'ilay fofona mifikitra be. Mahatonga ahiahy ireo fihetsika ireo hoe ampiasaina ho fomba entina manasazy ireo tanàna izay fanaovana fihetsiketsehana isan-kerinandro tsy mitsahatra ny Skunk.